Beerta ubaxa, ama sida loo abuuro khudrado quruxsan?
Iyadoo imaanshada guga, degganaha xagaaga oo dhan iyo ninkii beerta ka shaqeeyaa wuxuu bilaabmaa inuu sameeyo qorshihiisa. Beerta qof ayaa kuu ogolaanaysa inaad koraan dhammaan dalagyada markasta, oo ay la socdaan ubaxyo iyo geedo yaryar. Laakiin dad badan ayaa ku kooban xajmiga si ay u qanciyaan baahidooda khudaarta ay u noqdaan naqshadeeyayaasha muuqaalka. Hal qof, beerta waa fursad ay ku buuxiso maqaasiinka xilliga dayrta, mid kale - meel gees ah oo xasilan nafta.
Khaladaadka caanka ah ee naqshadeynta beerta. Qaybta 1aad: Xuduudaha iyo Xuduudaha
Macaamiisha badan ee guryaha waddanka ah, hoyga hooyo ma aha oo kaliya guri, laakiin waa sii socoshada nafta, meel loogu talagalay nasashada jirka iyo dareenka. Sidaa daraadeed, rabitaankani wuxuu ka dhigi doonaa meel qurux badan sababtoo ah dadka deggan xagaaga ee naqshadaynta muuqaalka, sayniska ee sida loo soo celiyo beerta sariirood oo taxane ah iyo geedo si aan caadi ahayn u shaqeeya oo u shaqeeya farshaxanka.
Khaladaadka caanka ah ee naqshadeynta beerta. Qeybta 2aad: qaab, midab, halbeeg
Waxaan horey u soo sheegnay wax ku saabsan ururinta xiriirka beerta iyo guriga, sida loo kala qaybiyo goobaha aagagga iyo abuuro "heerar kala duwan". Waxaanu soo sheegnay doorka xayndaabka ee naqshadda dhismaha beerta. Maanta waxaan ka hadlaynaa halbeegga, qaabka iyo midabka. Xaqiiqda 1. U-bogsashada joometiriga Mid ka mid ah mabaadii'da naqshadda muuqaalka ayaa ah qawaaniinta lagu soo celinayo motifs.
Maantana waxaan ka hadli doonnaa xulashada sawirrada beerta, oo ku saabsan isticmaalka saxda ah ee muraayadaha, mana dhaafeyno dhibaatada dhirta dhirta. Iyadoo la falanqeynayo khasaarihii caadiga ahaa ee qurxinta, waxaan awoodi karnaa in aan soo qaadno fikradaha asalka ah ee qurxinta muuqaalkayaga. Khalad 1. Tartamid xad-dhaaf ah oo leh tirooyin iyo xayeysiin Sawirro jardiinooyinka waa kuwo caan ah oo ku yaal wadamada qaaradda Yurub.
Suunka kalluumeysiga ee amniga beertaada
Haddii aad ka daalan tahay cayayaanka beerta beerta, soo iibso dabin waxtar leh - suunka xayiraadda. Thanks to qalabkan casri ah, tirada cayayaanka ee keena dhaawac aan loo baahnayn geedaha khudradda ayaa si weyn u yareeya aaggaaga. Caleemaha yaryar, caarada yaryar, aboorka, gawaarida ubaxyada, gawaarida roodhida, aphids, dhirta iyo cayayaanka kale ee yaryar ayaa ah kuwa ugu xun ee goosashada mustaqbalka ee berry iyo miraha beertaada.
Rhubarb ee beertaada: maxay tahay faa'iido leh iyo maxaa waxyeello leh?
Rhubarb waa dalagga khudradda ugu caansan. Tani waa warshad dilka ah oo leh petioles fareeshka ah iyo caleemaha asalka ah, oo samaysanaya rosette qaro weyn iyo ballaaran. Sababtoo ah petioles, kaas oo duubaya biyaha roobka, waxay magaceeda u bixisay: "reos" waxaa laga tarjumay luqada Giriigga "socodka". Markii ugu horreysey waxaa lagu soo bandhigay Yurubta Dhexe Dhexe, laakiin waxay bilaabeen in la cuno kaliya qarnigii 18aad.
Cimilada caanka ah ee Shiinaha ee Feng Shui waa farshaxanka tamarta tamarta. Marka la eego aragti dhaqameed ee isbedelkan, adduunka la arki karo waxaa loola jeedaa tamarta Qi, kaas oo u kala baxa si kala duwan iyadoo ku xiran arrimo kala duwan. Hawsha asxaabta Feng Shui, iyo qof kasta oo raba in uu helo isku-noolaanshaha, waa in la keeno qulqulka Qi ee isu-dheellitirka oo abuuraya jawiga ugu wanaagsan.
Miyuu suurtogal u yahay in ay koraan berry goji on aniga qudhaydii koox dhexe?
Berry Goji waxaa loogu yeeraa argagax dhab ah, maadaama ay awoodaan inay dib u helaan caafimaadkooda lumay iyo soo kabashada. Laakiin xaggee bay miraha aan caadiga ahayn ka soo baxeen, maxayse yihiin? La kulan goji! Dhab ahaantii, goji waa nooc ka mid ah geedo-geedeedka iyo koritaanka Tibet iyo Shiinaha.
Ey eey ku leedahay guri gaar loo leeyahay: maxay tahay jinsiyada la doorto?
Milkiilayaasha Dachas ayaa si dhakhso ah ama ka dib uga fekeraya sida loo helo saaxiib afar lugood leh. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la ogaado in eey kasta aysan awood u laheyn inay ku noolaato meel ka baxsan magaalada, sidaas daraadeed waa lagama maarmaan in la qaado masuuliyad dheeraad ah si ay u doortaan curinta, iyo sidoo kale in ay tixgeliyaan waxyaabaha gaarka ah ee xayawaanka. Ugu horreyn, go'aan ka gaadho ujeedada aad qorsheyneyso inaad ey ey haysato.
Tiknoolajiyada casriga ah: Beerta Fibonacci ee jikadaada
Cagaarka beeraha ee kireeyaha ma aha fikrad cusub. Qaado ugu yaraan qaansiirka caan ah, kuwaas oo gurigeyaal badan oo si hufan u diyaariyaan dheriyada ama koofiyada si ay u helaan cagaarka. Dad badan ayaa sii socda oo si hufan u koraan khudradda cagaarka ah iyo cagaarka, iyo miraha sidoo kale waxay ku yaalaan guryaha beeralayda xirfad leh.
Dabeecadda Naturgarden - qaab ama dabiiciga ah ee beerta?
Milkiilayaashu waxay ku dadaalayaan inay sare u qaadaan oo yareeyaan meel kasta oo xagaaga ah. Ma aha oo kaliya in la helo dhirro dheeraad ah ama shaqooyin waxtar leh, laakiin sidoo kale ku saabsan helitaanka farxad iyo raaxo. Taasi waa sababta muuqaalku yahay mid caan ah.
Khaladaadka caadiga ah marka la sameeyo balli beerta
Ku dhowaad dhammaan jardiinooyinka waxay leeyihiin kaydka. Waa in lagu daraa shaxanka: milkiilayaasha sida balli u gaar ah, waxay u tixgeliyaan guulaha beerta ee ugu weyn waxayna ku faani karaan. Dhammaan tani waa mid la fahmi karo, laakiin waxaa ku filan si adag xirfad u leh in uu kormeero kaydka, maadaama ay jiraan waxyeellada dhibta ee abuuritaanka. Caqabadaha ayaa si caddaalad ah u joogta jardiinooyin badan.
Xaaladdan, waxaa laguugu soo bandhigi doonaa warqad cajiib ah oo aad ku karisid maraq fiiqda.
Top ugu noocyo jiilaalka ugu delicious ee tufaax
Waxaa la aaminsan yahay in calaamada kaliya ee nooc tufaax ah oo tufaax ah casaan ah. Badanaa midabkani waxaa laga helaa kaliya xilliyada qaboobaha ee geedaha tufaaxa. Iyo sidee noocyada dambe ee ugu macaan? Marka aad dooranaysid geedo xilliga qaboobaha, oo loo yaqaanno tufaax goor dambe ah, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo arrimaha muhiimka ah.
Qorshahan fiidiyowga ah waxaad arki doontaa tusaale ahaan sida aad u dhisi karto pergola alwaax leh gacmahaaga.
Waxaa laga yaabaa in adduunka qaar ka wanaagsan oo aan lahayn xuduudaha iyo dayrarka, si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadan xaadirka ah way jiraan. Hadday sidaas tahay, markaa waa inaad sameysid wax wanaagsan oo waxtar leh ama ka yar. Sidaa daraadeed, xayndaab kasta oo dacha ah ma aha kaliya xayndaab, laakiin sidoo kale sii wadida naqshadaynta muuqaalka, qaybta dhismaha oo dhamaystiran qaabka guud.
Video: Dab-damisyo, Qaybta 1aad
Fiidiyowgaan waxaad ku arki kartaa sida ay u sameeyaan alaab guri oo leh caawinaad dab.
Horumarinta cawska sida ganacsiga miyiga
Walnut waa wax caafimaad leh oo nafaqo leh, hodan ku ah fiitamiinada iyo macdanta. Walnut lowska waxaa loo isticmaalaa macmacaan macmacaanka, kiriimyada iyo macmacaanada kale, iyo sidoo kale ujeedooyin caafimaad oo loogu talagalay soo saaridda daawooyinka. Taasi waa sababta beeraha ee walxaha ay noqon karaan ganacsi faa'iido leh iyo habka saxda ah waxay keeni kartaa dakhliga xasilloon.
Doorashada dhirta loogu talagalay beer yar-yar oo dheri ah
Jardiinooyinka yaryar ama beeraha dhirta yaryar ayaa dhawaan soo noqnoqday. Xusuusnow waxa fikradda ugu weyn ee noocan ah. Guud ahaan, mashruuc kasta oo noocaas ah waa nooc ka mid ah noocyada yurub ah ee kaabayaasha dhaqaalaha ah, kaliya waxaad abuuri kartaa wax yar oo ka kooban dhir kala duwan oo ku jira weel gaar ah kuna dar waxyaabo kale oo farshaxan.
"Buste" loogu talagalay sariiraha beerta, ama maxaa u dabooli kara dhulka jiilaalka?
U ogolow dadka degaanka xagaaga in ay qaataan xilliga dayrta ka dib goosashada sariirta dharka. Shaqadani way shaqeyneysaa, tayada ciidda wanaajiso, laakiin hoos ayey u dhacdaa. Bannaanka u isticmaalaya hababka beeraha dabiiciga ah, haddii kale lagu daaweeyo sariiraha. Aan ka fikirno sida si haboon loogu diyaar garoobo beerta jiilaalka. Maxaad ugu baahan tahay "buste" beerta?